Haddii e-mail iimeyl ay leedahay mawduuc isbuucyadii la soo dhaafay, waxay ahayd daahfurnaanta. The Xarun loogu talagalay haybadda wanaagsan (CEP) ayaa soo bandhigay warbixinta la yiraahdo Wadaagista Waajibaadka Muhiimka ah: Isukeenid Aasaasi ah. In a post post markii la sii daayay, Ellie Buteau, madaxweyne ku-xigeenka CEP-da ee cilmi-baarista, wuxuu ku baaqay "wada-hadal balaadhan oo ku saabsan daahfurnaanta deeq-bixiyeyaasha," aasaas adag oo la wadaagayo macluumaadka faa'iido u leh labada aasaas iyo deeq-bixiyeyaasha marka aynu doonayno in aan horumarino jawi wanaagsan oo adag, Arrimaha CEP-da waxay qortaa in beertu ay horumar ka gaartay higsashooyinka, istaraatiijiyada, iyo geeddi-socodka - taas oo aan faa'iido-daro ku qanacsaneyn oo faa'iido leh. Hase yeeshee, asaasiyayaashu, waxay samayn karaan wax badan oo dheeraad ah si ay u bixiyaan daahfurnaanta ku saabsan waxa aan bartay iyo khibrad.
"Marka Aasaasiyayaashu yihiin Caqli-xumo"Wuxuu ahaa cinwaanka iijaabada soo socota si aan u qabsado indhahayga. Ka jawaabista warbixinta CEP, Marc Gunther wuxuu caan ku yahay qoraallada aasaasiga ah, qoraal: "Dhammaanba, aasaasihii ayaa jira oo dunida ka dhigaya meel wanaagsan, iyada oo la yareeyo dhibaatada ama kor u qaadida fayo-qabka. Waa inay ku qasbaan dhammaan meheradahooda - deeqahooda, hantidooda maalgashiga iyo aqoontooda - inay dhammaan doonaan. Laakiin iyagu maaha. "
Wadaagista Waxa aan baranay
Machadka McKnight wuxuu dhowaan sii daayay version 2.0 of our saameyn ku yeelatid shabakadda maalgalinta. Waxa ay ka duwan tahay inaanu bixinayno faahfaahin fudud, faahfaahin heerkale oo ku saabsan dhammaanteen saameeyaan maalgelinta iyo saddexda nooc ee nooca ah rajooyinka la filayo: dhaqaalaha, deegaanka iyo saameynta bulshada, iyo barashada.
Dib u soo noqoshada McKnight ee waxbarashadu waxay u jeedinaysaa suuq geyn dheeraad ah shaqaalaha barnaamijka, iyo sidoo kale deeq-bixiyeyaasheenna, maadaama ay tixgeliyaan siyaabaha loo kordhiyo qalabka qalabka ee isbedelka bulshada. Tusaale ahaan, waxaan martigelinnay in ka badan 20 deeq bixiyayaasha barnaamijka Mississippi River si ay u bartaan shaqada Ku dhiiri geli caasimadda, kaas oo horumarinaya qalab maal-gashi si wax looga qabto yaraanta biyaha ee ku taala Colorado River. Iyadoo Colorado iyo Mississippi River ay la kulmaan caqabado badan oo kala duwan, qaabka guud ee soo jiidashada maalgashiga khaaska ah si wax looga qabto dhibaatooyinka biyaha wabiga waxay dhiirigeliyeen fikradaha hal abuurka ah ee lagu dabaqayo fikradahaas maxaliga ah.
Intaa waxaa dheer, waxaan la yaabnay tirada codsiyada ku saabsan barnaamijka maalgashiga asaasiga ah ee asaasiga ah iyo sidoo kale maalgashadayaasha iyo ururada kale. Waxay si gaar ah u daneynayaan in ay jawaabo u helaan "sida" su'aalaha - sida loo bilaabi lahaa, sida loo ilaaliyo kormeerka habboon, sida loo helo maalgelin, sida loola shaqeeyo lammaaneyaasha. Sida aan u soo aragnay su'aalahaan shakhsi ahaaneed, waxa muuqatay in bixinta faahfaahin asaasi ah oo faa'iido leh ay u tahay dhagaystayaal ballaaran.
Xitaa ma'aha faa'iido la'aanta waxay ku qanacsan tahay qiimaha fahamka himilooyinka, istaraatiijiyada, iyo geeddi-socodka - sidoo kale sidoo kale maalgeliyeyaasha ayaa faa'iido leh marka aasaas ay si fudud u bixiso ujeedooyinkeeda maalgelinta, istaraatiijiyada, iyo geedi socodka. Waxaan tallaabo tallaabo dheeraad ah ka dhignay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan natiijooyinka aan aragno si kuwa kale ay wax uga bartaan waaya-aragnimadeena. Hoos u dhaco - iyo mararka qaarkood jahawareerka - baaxadda sida saameynta maalgashiga, barashada intaa ka badan ayaan ka soo wadaagi karnaa midba midka kale, si ka fiican.
Wadaagista Faahfaahinta Waxtarka leh Waxay Qaadi Karaan
Kiiska, wax yar kadib markii la bilaabay bogga, waxaan ka helay email ka yimid agaasimaha hay'ad amaahda oo aan faa'iido doon ahayn oo diiradda saaraya horumarinta miyiga. Wuxuu qoray:
"... kudos in aad wadaagto macluumaadka ku saabsan xaddiga iyo shuruudaha maalgelinta la xiriira barnaamijka aad samaysay. Waxaa jira dareen ku saabsan daahfurnaanta ku saabsan maalgashiyadaas ka yimid aasaaso badan. Marka aan sare u qaadno caasimadeena CDFI [Hay'adda Horumarinta Bulshada], la'aanta hufnaanta waxay adagtahay in la fahmo suuqa iyo in la sameeyo qiyaaso ku saabsan kaalinta PRI laga yaabo in ay ka ciyaaraan istaraatiijiyadayada waaweyn. Waxaan aqoonsannay PRIs inay tahay ilaha caasimadda CDFI, waxaanan leenahay liis aasaasi ah oo aan u malaynayno in uu jiro isboorti udhexeeya ujeedooyinka PRI iyo waxqabadkeena CDFI. Laakiin marka aan baaro dhaqdhaqaaqa PRI ee kuwan iyo kuwa kale ee aasaasiga ah, inta badan, macluumaadka fudud ee aad bixisay (qadarka, muddada dhererka, iyo dulsaarka) ayaa maqan. "
Maadaama aasaasiyado badani ay abaabulaan dakhliga ku soo gala maalgashiga la xiriira barnaamijka iyo qaababka kale ee maalgelinta la xidhiidha howlgalka, oo ka jawaabaya codsigan macluumaadka sahlan waa miro yar. Iyadoo yar yar oo kaliya, dhammaanteen waxaan bilaabi karnaa inay bixiyaan macluumaad faa'iido leh oo kuwa doonaya in ay u diraan qaababka deeqda ah ee caasimada si loogu helo faa'iidada dadweynaha.
Marka aan miisaanno khatarta sharciga ah iyo abaalmarinta daahfurnaanta ee meeshan, ma sii wadno wadaagista macluumaadka faa'iido leh ee kuwa kale ka sii adag sidii loo baahnaa. Aynu soo qabanno fursadda hagaajinta joogtada ah, ugu yaraanna, daboolaan asaasiga.
Mawduuca: Isgaadhsiinta, Maalgashiga Saameynta